Noam Chomsky tany Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2010 7:39 GMT
Tamin'ny 13 Aogositra, nikabary tao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking any Beijing i Noam Chomsky. Chomsky, iray amin'ireo olona manampahaizana isan'ny misongadina amin'izao vaninandro iainantsika izao, dia malaza amin'ny hafanam-pony ara-politika sy ny fandraisan'anjarany amin'ny fanabeazamboho ny teny sy ny filaozofia. Ny resaka, nampitondraina ny lohateny hoe Ny manodidina ny Drafi-Pandaminana izao Tontolo izao: Fitohizan-draharaha sy Fiovàna (Contours of World Order: Continuities and Changes), dia saiky nirona betsaka tamina olana lehibe roa atrehan'ny zanak'olombelona: ny ady nokleary sy ny fahasimbàna/fikorosian'ny tontolo iainana.
Raha nanavao ny tsikera nataony momba an'i Etazonia i Chomsky, dia naneho ihany koa ny heviny momba an'i Shina. Raha ny fijerin'i Chomsky, ireo firenena vao mipongatra toa an'i Shina sy India dia mbola manana làlana lavabe hizorana raha hifaninana amin'i Amerika. Ny olana tena miavaka dia ny sàndan'ny endri-pîvoarana Shinoa miantraika amin'ny tontolo iainana, sy olana anaty ary ara-tsosialy maro tsy maintsy atrehan'i Shina. Tamin'ity herinandro ity, ny Southern Metropolitan Daily dia namoaka resadresaka iray niarahana tamin'i Chomsky. Nadika eto ambany ny sombiny tamin'ilay resadresaka.
Noam Chomsky tao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking
SMD: Nanaiky ny fanatontoloana ny ankamaroan'ny Shinoa. Tanatin'ireo taompolo telo farany, indrindra fa taorian'ny nidiran'i Shina tao amin'ny World Trade Organization (WTO) – Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Varotra, marobe ireo Shinoa nahazo tombontsoa goavana tamin'izany. Saingy ianao kosa mahita kilema amin'ny fanatontoloana.
Chomsky: Tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny resaka fanatontoloana ny fahatafitan'i Shina amin'ny lafiny toekarena. Io dia mifamatotra amin'ny varotra sy ny fanondrànana. Nikisaka tsikelikely ho firenena mitodika amin'ny fanondrànana i Shina. Tsy misy na iray aza, eny fa na dia izaho, ka hanohitra ny fanondrànana. Saingy tsy izany no fanatontoloana. Raha ny marina, nanjary lasa orinasa ao anatin'ny rafitra famokarana any amin'ny faritra avaratra-atsinanan”i Azia i Shina. Raha mijery ny faritra manontolo ianao, dia hahita azy ho tena mikofokofoka tokoa. Ny hadirin'ny fanondrànana ataon'i Shina dia tena goavana be. Saingy kosa misy zavatra tsy dia voajerintsika loatra. Ny fanondrànana avy ao Shina dia mifamatotra betsaka amin'ny fanondrànana ataon'i Japana, Korea ary Etazonia. Ireo firenena ireo no manome an'i Shina ny kasinga avo lenta sy ny teknolojia. Ny hany ataon'i Shina dia ny manàmbatra, ary ny manome label ny vokatra voahodina ho ‘Made in China – Vita avy any Shina.’
Nivoatra haingana be i Shina noho ny fanarahana politika hendry sy mivelatra. Saingy raha olona an-tapitrisa maro no afaka tamin'ny fahantrana, goavana be kosa ny sàndany toy ny eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Mitambesatra eo an-tsorok'ireo taranaka ho avy izany rehetra izany. Tsy miraharaha izany ny mpahay toekarena, nefa na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy misy handoa ny sàndan'izany rehetra izany ao aoriana ao. Mety ho ny zanakao izany na ny zafikelinao. Ireo rehetra ireo dia tsy misy ifandraisany velively amin'izay fanatontoloana sy ny WTO.
SMD: Heverinao ve fa ny fisongan'i Shina dia mety hanova ny rafitra erantany? Afaka hitazona ny toerana misy an'i Etazonia ankehitriny ve i Shina ao aoriana ao?
Chomsky: Tsy dia mino loatra aho; sady tsy manantena ihany koa. Tena manantena marina tokoa ve ianareo ny hahita Shina iray manana toby miaramila 800 any ivelany, manani-bohitra ka manongana ny governemantan'ny hafa, na manao asa fampihorohoroana? Izany anie izao no ataon'i Amerika ankehitriny e. Heveriko fa tsy hisy izany, ary tsy hitranga ao Shina. Tsy maniry ny hitrangan'izany mihitsy aho. Efa nanova izao tontolo izao sahady anie i Shina e. i Shina sy India miaraka dia efa manome ny antsasaky ny mponina erantany. Misondrotra sy mivoatra izy ireo. Saingy raha tsorina ara-bakiteny, ny haren'izy ireo dia pitiny kely monja amin'ny haren'izao tontolo izao. Ireo firenena roa ireo dia mbola lavi-dàlna hizorana sy be olana anatiny tsy maintsy hatrehana, izay antenaiko fa ho voavaha miandalana ihany. Tsy dia misy antony loatra tokony hampitahàna ny dindon'izy ireo manerantany amin'ny ananan'ireo firenena manan-karena. Ny fanantenako dia ny mba hananan'izy ireo dindo miabo eo amin'ny tontolo, saingy izany dia mila fanaraha-maso akaiky.
Mila manontany tena i Shina ny amin'izay toerana iriany hotànana ao anatin'izao tontolo izao. Soa ihany, tsy misafidy hitazona anjara toeran'ny besandry i Shina ka hoe hametraka tetibola betsaka ho any ara-tafika , sns. Nefa manana anjara toerana tokony horaisiny i Shina. Mpanjifa ngezabe amin'ny resaka vokatra fanodina izy, ary misy ny lafiny tsara sy ny ratsy ao (be ny hendry sy ny gaigy ao). Ohatra, i Brezila dia hahita tombontsoa manokana raha manondrana entana mankany Shina. Amin'ny lafiny iray hafa koa, mety haràtra ihany koa ny toekareny. Ho an'ireo firenena manana otrikarena misavovona toa an'i Brezila sy Peroa, ny olana iray dia ny fiankinan-dohan-dry zareo amin'ny fanondranana ireo vokatra fototra, izay tsy dia tsara alain-tahaka loatra raha resaka fampandrosoana. Ho fanovàna ny fomba fampandrosoana any amin-dry zareo, ilain-dry zareo aloha ny hamahàny ny olana anatiny sy ny manova fomba fanao mba ho lasa mpamokatra, fa tsy hihanona fotsiny amin'ny fanondranana vokatra fototra mankany amina firenen-kafa mpanodina.
SMD: Fanamby amin'ny demokrasian'ny Tandrefana ve ny fahombiazan'i Shina?
‘Ndeha isika hanao fampitahana ara-tantara. Loza nananontanona ny demokrasia Britanika ve ny fisondrotan'i Etazonia? Etazonia dia naorina teo ambonin'ny fanaovana vono moka ireo indizena (tompon-tany) sy ny rafitra fanandevozana. Mety ho an'ny firenena hafa ve izany lasitra izany? Tianao haka lesona sy hanaraka lasitra toy izany ve i Shina? Ekena fa nivoatra ka lasa firenena demokratika i Etazonia izay matanjaka amin'ny lafin-javatra maro, saingy ny demokrasiany dia tsy mivoatra manaraka izay lasitra izay, izay tsy misy maniry haka tahaka azy rahateo raha mbola olona mahay mandinika.
Mivoatra i Shina, nefa kosa tsy misy azo ilazàna mihitsy fa hoe ny fivoarana anatiny ao dia miteraka horohoro ho an'ny Tandrefana. Ny fanamby amin'i Etazonia dia tsy ny fandrosoan'i Shina akory, fa ny fahaleovantenany. Izay no tena fanamby.
Azonao lazaina avy amin'ireo lohateny lehibe an-gazety isan'andro fa ny ifantohan'ny politika ivelan'i Etazonia amin'izao fotoana dia i Iran. Ny taona 2010 dia nantsoina hoe Taonan'i Iran.’ Iran dia notondroina ho ny zava-mahatahotry ny politika ivelan'i Etazonia sy ny rafitra manerantany. Nametraka sazy henjana, tsy nifampierana i Etazonia, saingy tsy nanaraka izany i Shina. Tsy nanaraka velively ny fitarihan'i Etazonia i Shina. Ho solon'izay, nanohana ny sazy nomen'ny firenena mikambana izy, izay tena maivana tokoa raha mitàha amin'ny olana misy. Andro vitsy mialohan'ny handehanako ho aty dia nampitandrina an'i Shina i Etazonia, natao tamin'ny fomba tsara petraka tokoa. Io dia milaza fa i Shina dia tokony hitàna andraikitra iraisam-pirenena, i.e. manaraka ny baikon'ny Etazonia. Izany no andraikitra iraisam-pirenen'i Shina.
Izany no endriky ny imperialisma faran'izay tsotra, izany hoe ny firenena hafa dia tokony hanao araka izay angatahanay. Raha tsy izany, tsy tompon'andraikitra izy ireny. Heveriko fa toran'ny hehy ireo olona ambony tao amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Shinoa raha mahare izany. Saingy izany no làlan-tsaina fototra izoran'ny imperialisma. Raha ny marina, Iran dia manjary fikorontanan-tsaina noho izy tsy manaraka ny toro-làlan'ny Etazonia. Horohoro lehibe i Shina, sahala amin'ny maha-olana goavana rehefa tsy manaiky hanaraka baiko ny firenena goavana iray. Io no fanamby tsy maintsy atrehan'ny Etazonia.
Tiako dia tiako rangahy ny nandikanao ity lahatsoratra ity. Raha tsy noraisinao moa izy ity dia nataoko ihany koa… soa fa misy ny fiaraha-miasa. Ilay WTO dia OMC amin’ny teny frantsay sao misy tsy mahazo!
28 Aogositra 2010, 20:17